Umsakazo we-teleskopu omkhulu wase China usanda kuzwakala isiginali engajwayelekile emkhathini - BGR - Tamban RELAY
Accueil » ISAYENSI Umsakazo we-tele-telecope omkhulu ovela eChina usanda kuzwakala isiginali engajwayelekile emkhathini - BGR
I-China ichithe iminyaka emihlanu kanye nama-dollar ayizigidi ezingama-200 ekwakhiweni kwesibonakude sayo esingamamitha amahlanu, esibizwa nge-FAST. Kwakuwumsebenzi omkhulu, kepha umphumela uyisimangaliso sobuchwepheshe, yisibonakude esikhulu kunazo zonke esisezingeni eliphezulu emsakazweni emhlabeni. Manje, njengoba iChina isilungele ukubuyekezwa kokugcina kwephrojekthi eseqediwe ngenyanga ezayo, ososayensi bathi sebesebenzise isibonakude ukuthola isibonakaliso somsakazo esingaqondakali esiveza emkhathini.
Ngezikhathi ezithile, izibonakude zomsakazo eMhlabeni zithola amasiginali anamandla avela kwimithombo engaziwa. Lokhu kuqhuma komsakazo okusheshayo (okufushanisiwe ku-FRB) kuvame ukuvutha amalangabi, kepha abambalwa babo baye babonwa bephindaphinda ngezikhathi ezithile okubonakala sengathi kuhleliwe. Isiginali ethile, eyaziwa ngokuthi yi-FRB 121102, kuthiwa yavela kaninginingi, nesibonakude esisha sha esisha saseBrithani ngizwe kuzwakala futhi kucace .
Akekho owaziyo ngempela ukuthi yini edala i-FRB, futhi leyo yingxenye yalokho okubenza bajabule kakhulu ososayensi. Iqiniso lokuthi iningi labo lifika ngesikhathi, kepha ukuthi abanye, njenge-FRB 121102, liyaziphindaphinda, lenza inqubo ebaphilisa ibeyimfihlakalo nakakhulu.
"Lapho lokhu kubuyekezwa sekwenziwe, i-FAST iba isibonakude esamukelekayo sokubheka indawo yonke. UJiang Peng, unjiniyela oyinhloko we-FAST, esitatimendeni uthe. "Ngokushesha kuvulekele izazi zezinkanyezi zaseChina kusukela ngo-Ephreli 2019. Ngemuva kokwamukelwa kokwakhiwa kwezwe, izazi zezinkanyezi ezivela emhlabeni wonke zizobe zivulekile. "
Iqembu lososayensi elisebenzisa i-FAST litholakele izinkomba ze-FRB 121102 ku-Agasti 29, lezwa "ukuqhuma okuningi" kwesiginali. Lo mcimbi othile ububaluleke kakhulu ngoba abukho obunye ubuciko besibonakude eMhlabeni obabubone ukuphindaphindwa okuningi kwesiginali ngesikhathi esifushane, okubonisa ukuthi amandla amangalisayo esibonakude esisha saseChina angasiza ukuvula izimfihlo zesiginali.
I-FAST izoba nezandla ezigcwele, abacwaningi banethemba lokuyisebenzisa ocwaningweni oluqhubekayo lwama-pulsars akude, izinto ezifana ne-hydrogen, kanye nemisakazo eyengeziwe yeRadio Radio Bursts.
Ososayensi bakha amaqabunga wokufakelwa angaguqula ukukhanya kwelanga kube umuthi - BGR
UKate Middleton uyavuma ukuthi unqabile uGeorge noCharlotte ukuthi baqhubeke nokuphuma naye noDuke